तपाईंको पहाड घर कहाँ हो ? « रिपोर्टर्स नेपाल
तपाईंको पहाड घर कहाँ हो ?
भीष्म उप्रेती : मैले धेरैपल्ट जवाफ दिइसकेको प्रश्न हो यो । कतिपल्ट यस प्रश्नलाई मैले अत्यन्त सामान्यरूपमा लिएको छु र जवाफ पनि त्यत्तिकै सामान्यरूपमा नै दिएको छु । यस प्रश्नको जवाफमा मैले सामान्यतया भन्ने गरेको कुरा हो– ‘मेरो पहाड ताप्लेजुङ जिल्ला हो, फूलबारी गा. वि. स. ।’
यसरी धेरै पल्ट धेरै ठाउँमा सामान्यरूपमा नै सामना गरिएको र सामान्यरूपमै जवाफ दिइएको यस प्रश्नमा अन्तरनिहित मर्म भने आजभोलि निकै गम्भीर लाग्न थालेको छ, निकै वजनदार र अर्थपूर्ण लाग्न थालेको छ । यस्तो किन लाग्न थालेको हो ? अथवा के यो एकाएक लागेको हो त ? जस्ता प्रश्नहरू पनि सँगसँगै उभिएका छन् । म मूल प्रश्न र त्यसैको दुईतिर उभिएका यी अन्य प्रश्नहरूको समेत अनुहार हेर्छु गम्भीरतापूर्वक । त्यसपछि आन्तरिक तथा बाहृय वातावरण र अन्य अनेकौँ कारणहरूलाई पनि सम्झन्छु । लाग्दैछ, मलाई आफ्नो पहाड सोध्ने यो प्रश्न चानचुने होइन, त्यसैले अब त्यत्तिकै हलुका पाराले जवाफ दिन सकिने
त्यो पुख्र्यौली थलो, त्यो फूलबारी ताप्लेजुङ मैले कहिल्यै देखेको छैन न त मेरा आँखामा त्यसको काल्पनिक तस्बिरै आउँछ कहिल्यै । तैपनि हजुरबाबाटै कथाभै’m सुनेको आधारमा बूढापाकालाई भनिदिने गर्थें – ‘मेरो पहाड त ताप्लेजुङ हो ।’ वास्तवमा ताप्लेजुङ त मेरा जिजुबाजे र हजुरबाको पहाड रहेछ । मेरो बुबामा सायद अलिअलि धङधङीसम्म त होला तर पहाडै त बुबाको पनि हो कसरी भनूँ !
बाल मनोविज्ञानको एउटा सिद्धान्तअनुसार बालबालिकाहरूको सोच्ने, विचार गर्ने, बुझ्ने एवं अर्थ्याउने तौरतरिकाको लागि मस्तिष्कको प्रेमवर्क दुई साढे दुई वर्षको उमेरदेखि विकास हुन सुरु भई तेह्र, चौध वर्षसम्मको उमेर अवधिमा भइसक्छ । त्यसपछि अध्ययन, अनुभव आदिले प्राप्त हुने ज्ञानले उक्त प्रेमवर्क एवं चिन्तनको शैलीमा सामान्य परिमार्जन ल्याए पनि मूल चूरो वा आधारमा भने कहिल्यै परिवर्तन हुँदैन । मैले आफ्नै आँखाले यो सुन्दर प्रकृति र आफ्नै जीवनको समेत पहिलो दर्शन शनिश्चरे ३, कालीस्थान झापामा गरेँ । त्यसपछिका जीवनका सर्वोत्कृष्ट प्रथम सत्र वर्ष त्यहीँ बिताएँ । मनोविज्ञानको सैद्धान्तिक पक्षलाई विचार गर्दासमेत मेरो शरीरको विकास, मेरो मस्तिस्कको निर्माण एवं विकास, मेरो हिँडाइ, सोचाइ, बुझाइको तरिकाको विकास एवं मानसिक संयन्त्र झापामै बन्यो । झापाकै अन्न, पानी, हावा र माटोले बन्यो । आज म काठमाडौँमा बसेको पच्चीस वर्ष भइसक्ता पनि काठमाडौँ किन अनुभूत हुँदैन मभित्र, काठमाडौँ किन ग्रहणीय बन्दैन अन्तरआत्मादेखि नै ? म किन सपना, विपना सर्वत्र झापा अनुभव गर्छु, झापा देख्छु, झापा सुन्छु र झापाली बोली बोल्छु- विचार गरिरहेको छु । जो कोहीले सोधे पनि तपाईंको घर कहाँ हो ? विनासोचसमझ टेपरिकर्डर खोले जसरी अनायास निस्किहाल्छ मुखबाट – ‘झापा ।’ त्यसपछि ‘काठमाडौँमा कहाँ नि ?’ भनेर अर्को प्रश्नले ठुँगेपछि मात्र सम्झनुपर्छ काठमाडौँमा कहाँ बस्छु म भन्ने कुरा । त्यसपछि सम्झेर भन्ने गर्छु- ‘बुद्धनगर, बानेश्वर ।’
यिनै सबै चिन्ताहरू र पीडाहरूको माझमा उभिएर म झापालाई स्पष्ट अनुभूत गरिरहेको छु । स्पष्ट देखिरहेको छु त्यहाँको हरियाली, त्यहाँको सुन्दरता र त्यहाँको दुःखपीडाको साङ्गोपाङ्गो तस्बिर पनि । पहाड कहाँ हो भनेर सोध्नु भनेको वास्तवमा तपाईंको उत्पत्ति कहाँ भएको हो भनेर सोधेको नै होइन र । तपाईं कहाँबाट आउनुभएको हो भनेर सोधेको होइन र । भिल्लको देशमा मणि भनेजस्तो यतिका वर्ष कुरै नबुझेर त्यत्तिकै बरालिएर हिँडेछु । झापामा भारत विहारका गलगलिया, पूणिर्या आदि विभिन्न ठाउँबाट खेतीमा काम गर्न आएका भारतीयहरू घर र्फकंदा देश जाने भन्थे । उनीहरू आफ्नो गाउँलाई नै आफ्नो देश भन्थे सिङ्गो भारत वा विहारलाई होइन । अहिले सम्झन्छु – देश वा पहाड वा परिचयको मर्म अपठित नै भए पनि उनीहरूले उहिले नै बुझिसकेका रहेछन् । मलाई मात्र यति कुरा बुझ्न यति लामो समय लागेको रहेछ । अहिले गुटगुटका दाबीहरूबीच, बढ्दो अराजकता र उच्छृङ्खलताबीच, देशले टुक्रनुपर्ने सम्भावित खतराको त्रासबीच झल्याँस्स ब्यूँझेको छु र विपनाको स्पष्ट उज्यालोमा सबै चित्र प्रस्ट देखिरहेको छु, मेरो आफ्नो पहाड पनि प्रस्ट देखिरहेको छु । मलाई यसपछि स्पष्ट बोध भएको छ मेरो पहाड कहाँ रहेछ भन्ने कुरा । मैले कत्ति हलुकासँग लिएको रहेछु यो विषयलाई । म काठमाडौँ बसूँ वा युरोप, अमेरिका पुगूँ, मसँगै मेरो पहाडको अंश पनि जाने रहेछ । मसँगै सुत्ने रहेछ यो, मसँगै उठ्ने रहेछ, मसँगै हाँस्ने, रुने पनि रहेछ मेरो पहाड ।
म बारम्बार सामना गरिरहेको त्यही प्रश्नलाई एक पल्ट पुनः भेट्न लालायित भएको छु । म यसपालि सगर्व भन्नेछु– ‘मेरो पहाड झापा हो, झापाको शनिश्चरे ३, कालीस्थान हो ।’